विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा चल्ने कारको मूल्य कति ??? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
५०० किमी प्रतिघन्टाको गतिमा कुद्न सक्ने विश्वको सबैभन्दा तीव्र गति भएको कार चाँडै बजारमा आउने भएको छ । १६ करोड मूल्य बराबरको यो कारले एउटा मिनी प्लेनलाई समेत पछि पार्न सक्ने बताइएको छ ।
पहिलो परीक्षणमै यो कारले ४३४ किमी प्रति घन्टाको रफ्तार हासिल गरेको थियो । ‘भेनोम भी–5’ नाम राखिएको यो अत्याधिक गतिको कारमा सात हजार सीसीको टर्बोचार्ज भी–5 इन्जिन लगाइएको छ जसको शक्ति १६०० हर्सपावर भएको बताइएको छ । तर यसको तौल भने सामान्य कारहरु जस्तै १३०० किलोग्राम मात्र रहेको छ जसले यसलाई तेजीका साथ कुदाउन मद्दत गर्छ ।
यसभन्दा पहिले ‘बुगाती वेरन’ लाई विश्वको सबैभन्दा तेज कारको नाम दिइएको थियो जसको गति ४३४ प्रतिघन्टा रहेको थियो । भेनम भी–5 को सात हजार सीसीको इन्जिनले नै यसलाई ताकत् दिन्छ जसले केबल १० सेकेन्डमै ३०० किमी प्रति घन्टाको रफ्तार लिन सक्छ । विमानको अवतरण गतिको समान यस कारलाई अहिले प्रदर्शनका लागि राखिएको छ । – एजेन्सी